‘घर मै बस्‍नुस्, राज्यको एक लाख ४ हजार रुपैयाँ जोगाउनुस्’ देशलाई झैनै गरीब हुन बाट बचाउनुस् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/‘घर मै बस्‍नुस्, राज्यको एक लाख ४ हजार रुपैयाँ जोगाउनुस्’ देशलाई झैनै गरीब हुन बाट बचाउनुस् !
काठमाडौं: सरकारले यो वर्षको तीज कुनै रमझम नगरी घरमै बसेर मनाउन आग्रह गरेको छ। मानिसहरु नातागोताकहाँ जाँदा आउँदा कोरोना फैलिन जोखिम झन् बढेको भन्दै सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्‍वर गौतमले यो पटकको तीज पहिले मनाएको रमाइलो सम्झेर चित्त बुझाउन आग्रह गरेका हुन्। ुयो वर्षको तीज अघिल्लो वर्षको रमाइलो सम्झेर मनाउनु होला।
नातागोता, माइत, मामला कतै नजानु होलाु, शुक्रबार भएको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने, ुअर्को साल रमाइलो गरेर तीज मनाउँला, यो पटक सरकारलाई सकेको साथ दिनुहोला।
प्रवक्ता गौतमले एकजना कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन राज्यले अहिले एक लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरिरहेको बताउँदै घर बाहिर सकेसम्म ननिस्किन आग्रह गरे। उनले अहिलेसम्म सरकारले एउटा टेस्ट पोजेटिभ पत्ता लगाउन प्रतिव्यक्ति एक लाख ४ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरिरहेको पनि सर्वसाधरणलाई स्मरण गराए। ु
एकजना कोरोना पोजेटिभ पत्ता लगाउन राज्यको एक लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छु, उनले भने, एकजना व्यक्तिलाई आइसियुमा राख्दा ३० दिन राख्दा ४ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। गौतमले कोरोना भइसकेपछि त्यसको उपचार एकदमै महँगो रहेको पनि जानकारी दिए।
कोरोना उपचार र जाँच बहुतै खर्चिलो छ। जरुरी काम नपरी घरबाट ननिस्किनुस्ु, उनले भने, अत्यावश्यक काम र सामान किन्‍न बाहिर निस्किँदा २ मिटर दूरी कायम गर्नुहोला, अनिवार्य मास्क लगाउनुहोला।
गौतमले चाडवाड मनाउँदा एकदमै सतर्क भइदिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले यो पटक घरकै बुबाआमा, दिदी भाइ र परिवारका अन्य सदस्य बसेर तीज मनाउन अपिल गरे। सरकारले ठूला चाडवाड नजिकिँदै गर्दा बढीभन्दा बढी सजगता र सतर्कता अपनाउन पनि सर्वसाधरणलाई आग्रह गरेको छ।